🥇 ▷ Razer: Prototype of Razer Phone 2 oo leh 512GB oo xusuusta ah, lambarada SIM iyo calaamada 'THX' ✅
Razer: Prototype of Razer Phone 2 oo leh 512GB oo xusuusta ah, lambarada SIM iyo calaamada ‘THX’
Telefoonka Razer 2 waxaa la shaaciyey Oktoobar 2018. Bilowgii Abriil, Razer wuxuu sii daayay nooc taleefan ah oo ku yaal Satin Black. Hadda sawirrada golaha ee Razer Phone 2 oo leh astaan ​​THX oo dhabarka ka muuqata ayaa muuqata. Moodeel kale oo gaar ah ama xitaa Razer Phone 3 ma shaqeysa?
(c) madal kountry83 / XDA
Madasha XDA xubinta kountry83 waxay leedahay dhowr sawir oo mid ah Razer Phone 2 oo leh astaan ​​THX oo lagu dhejiyay gadaasha aaladda. Iyo sidii oo keliya in uusan ahayn mid xiiso leh oo ku filan, waxaa jira wax badan oo laga sheego aaladda. Qalabka waxaa la soo saaray bishii Juun 2018, waxay leedahay 512 GB oo xusuusta ah, labaal SIM ah, taageero Widevine L1 ah iyo bootloader horeyba loo sii daayay.
Telefoon Razer ah oo wata shahaadada THX
Waxaan xasuusnaaneynaa: asalka Razer Phone 2 wuxuu la muuqday 64GB ama 128GB oo keydin ah oo keliya hal kaar SIM SIM ah. THX waa shirkad maqal ah oo soo saarta teknolojiyadda hi-fi-wax walboo laga bilaabo shineemooyinka ilaa nidaamyada maqalka ee gudaha gaariga. Telefoonka Razer 2 wuxuu leeyahay foorno hore oo cajiiba oo leh labo cod-weyne iyo Dolby Atmos. Shahaadada THX waxay sii wanaajin laheyd qibrada dhawaqa marar badan.
Tusaalaha suurtagalka ah ee Razer Phone 2 oo leh astaan ​​THX, xusuusta badan iyo lambarada SIM. | (c) kountry83 / XDA Forum / Montage: Areamobile
Moodeelka loo yaqaan ‘THX mood’ wuxuu u muuqdaa inuu yahay mid si lama filaan ah loogu diray xubin ka tirsan golaha. Waxbadan oo intaa ka badan lama oga noocaan qarsoodiga ah. Waxay noqon laheyd wax aan caadi aheyn in la bilaabo Razer Phone waxyar oo la hagaajiyay 2 ku dhowaad sanad dhan kadib markii la sii daayay asalka. Wareegyada loogu talagalay moodooyinka kor u qaadida noocan oo kale ah badiyaa waa 5-6 bilood kadib marka la sii daayo; hal sano ka dib, guuleystaha ayaa had iyo jeer dusha saaran khaanadaha. Waxay noqon kartaa tusaalaha Telefoonka Razer 3, laakiin tani waa mala-awaal saafi ah…
Xigasho: Madasha Soo-saareyaasha XDA